Bay Of Bengal « MMWeather Information BLOG
မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်မှ မုန်တိုင်း ဖြစ်နိုင်ခြေ ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်တွင် ဆက်လက်တွေ့နေဆဲ
By mmweather.ygn, on May 9th, 2014%
ပြီးခဲ့သည့် post များတွင် ဖေါ်ပြခဲ့သော ကပ္ပလီပင်လယ်မှ မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေအား GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်မှ ကြိုတင်ခန့်မှန်း တွေ့ရှိချက်သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်း – မေလ ၉ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ဝ၆း၃ဝ နာရီတွင် နောက်ဆုံးရရှိသည့် GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ် အချက်အလက်များအရ ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပြီး ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းမှ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်မြောက်ပိုင်းအထိ ဆက်လက်ရွေ့လျား ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိနေရဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ (ပုံ-၁ / ပုံ-၂)
ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရရှိသည့် နောက်ဆုံး ပုံဖေါ် ရရှိချက်များတွင် တွေ့ရှိရသည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း/မုန်တိုင်းအဆင့်ဖြင့် ကပ္ပလီပင်လယ်မြောက်ပိုင်းမှ စတင်ပြီး ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ အနောက်တောင်ဘက်စွန်းမှ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်သို့ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် ကပ်လျှက်အနေအထားဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ် ကမ်းခြေအထိ ဆက်လက်ရွေ့လျားမည့် လမ်းကြောင်း . . . → Read More: မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်မှ မုန်တိုင်း ဖြစ်နိုင်ခြေ ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်တွင် ဆက်လက်တွေ့နေဆဲ
Leaveacomment Uncategorized ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်
By mmweather.ygn, on May 5th, 2014%
GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်မှ မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မည့် အခြေအနေအားခန့်မှန်းထားရာတွင် ရေတစ်ဝက်/ကုန်းတစ်ဝက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် အနေအထားကြောင့် အားအလွန်ကောင်းမည့် အခြေအနေမရှိသော်လည်း မေလ ၁၂ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေပိုင်းတွင် အားအကောင်းဆုံး အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ နယ်စပ်အနီးမှ ဖြတ်ကျော်၍ ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်စဉ် . . . → Read More: ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်
One comment Uncategorized ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် INVEST-91B ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း JTWC မှ ထုတ်ပြန်
By mmweather.ygn, on November 19th, 2013%
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်း ဖြစ်နိုင်ခြေအဆင့် “HIGH”ရှိသည့် INVEST 91B အဖြစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မိုးလေဝသဌာနတစ်ခုဖြစ်သည့် JTWC မှ အတည်ပြု ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။ မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်သည့် နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက် ဝ၈း၃ဝ နာရီမှ နောက် ၂၄ နာရီအတွင်း INVEST-91B ၏ မုန်တိုင်း ဖြစ်နိုင်ခြေ အဆင့် “HIGH” ဖြစ်ကြောင်း ပါရှိပါသည်။ ထုတ်ပြန်ချက်အရ 91B သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ချင်နိုင်းမြို့ အရှေ့-အရှေ့မြောက်ဘက် ၄၄၅ မိုင်ခန့်၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုမြို့ အရှေ့မြောက်ဘက် မိုင် ၇၂ဝ ခန့်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ပုသိမ်မြို့ အနောက်-အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၅၆ဝ ခန့် . . . → Read More: ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် INVEST-91B ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း JTWC မှ ထုတ်ပြန်
3 comments Uncategorized ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်သို့ စတင်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိသည့် မုန်တိုင်း 02B
One comment Uncategorized ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း တည်ရှိနေဆဲ
မြန်မာနိုင်ငံ မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန နေ့စဉ်မိုးလေ၀သသတင်း – (၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၂၀)ရက်နေ့ ည(၇း၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်မှ ကောက်နှုတ်တင်ပြပါသည်)
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေ။ ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်(၁၂း၃၀)နာရီအချိန်တိုင်းထွာချက်များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသည် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် မုတ်သုံလေအားကောင်းနေပါသည်။
ထူးခြားသည့်အခြေအနေ။ ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်(၁၂း၃၀)နာရီအချိန်တိုင်းထွာချက်များအရ ယမန်နေ့ကတုံကင်ပင်လယ်ကွေ့တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောအပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်သည်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင်းမြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက်မိုင်(၁၆၀)ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟိုပြုနေပါသည်။ အဆိုပါမုန်တိုင်းငယ်သည်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွှေ့လျားမည်ဟုခန်းမှန်းရပါသည်။
မနက်ဖြန်ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းတွင် နေရာကွက်ကျား၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ကယားပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အထက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်နှင့်ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်နှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်၍ မိုးကြီးနိုင်ပါသည်။ ရွာရန်ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်။ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် တစ်ခါတစ်ရံ မိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီး၊ လှိုင်းအသင့်အတင့်မှ လှိုင်းကြီးနိုင်ပါသည်။ . . . → Read More: ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း တည်ရှိနေဆဲ
One comment Uncategorized အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းနှင့် မိုးများလာမည့် မြန်မာပြည်
Leaveacomment Uncategorized ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ဆက်လက်တည်ရှိနေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
နေ့စဉ်မိုးလေ၀သ သတင်း (၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၂၄)ရက်နေ့ နံနက်(၇း၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေ။ ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၅း၃၀)နာရီအချိန်တိုင်းထွာချက် များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသည် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင်မုတ်သုံလေအားကောင်းရာမှ အားအလွန်ကောင်းနေပါသည်။
ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့် ကယားပြည်နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်နှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်၍ မိုးကြီးနိုင်ပါသည်။ ရွာရန်ရာနှုန်းပြည်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်။ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် ရံဖန်ရံခါ မိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီး၊လှိုင်းကြီးမည်။ . . . → Read More: ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း